Munamato kuMwana Mutsvene weAtocha. ? Vhura Migwagwa, Dziviriro uye Hutano.
Munamato kuMwana Mutsvene weAtocha. Avo vedu vakatenda nokutendeka muchiKatorike, takamboita kamwe chete muhupenyu munamato kuMwana Mutsvene weAtocha kunyanya munyika dzakaita seVenezuela, Spain, Colombia, Honduras, Philippines, United States uye neMexico ichive yekupedzisira iko kunonamatwa nesimba rakawanda uye kupi kune dzimwe nzvimbo nzvimbo uko kunokudzwa zuva nezuva uye iyo inogamuchira zviuru zvevashanyi gore rega.
Ndomumwe wekushambadzira kwemwana Jesu uyo ​​ave akakurumbira nekuda kwezvakawanda zvishamiso zvinozivikanwa uye zvinonzi kwaari.
1 Munamato kuMwana Mutsvene weAtocha ndiani?
2 Namata kuna Iye Mutsvene weMwana weAtocha kuti avhure nzira
3 Munamato kuMwana Mutsvene weAtocha kuti udzivirirwe
4 Chishamiso chokunamatira kwehutano
5 Santo Niño de Atocha yakasimba here?
Munamato kuMwana Mutsvene weAtocha ndiani?
Guta reAtocha riri muSpain uye zvinozivikanwa kuti zana regumi nematatu rakapambwa zvizere nemaMuslim.
Ivo vakasunga vese vaiita zvechiKristu kutenda vasina kana chokunwa senzira yekurangwa kwakasimba kwezvavanotenda.
Panguva iyoyo chete vana vane makore gumi nemaviri vaibvumirwa kufudza vasungwa uye ndimo maizvozvo ndipo paakaonekwa Mwana Tsvene weAtocha.
Vasungwa vakatanga gamuchira kushanya kwemwana uyo aiuya kwavari zuva nezuva nedengu rechikafu kubva kwese munhu achidya akaguta.
Chinhu chakashamisa ndechekuti chikafu chaisapera uye tswanda yaigara ine chimwe chinhu kwavari.
Iye mukomana akapfeka zvipfeko zviri nyore kunge sepira asi vachiona chishamiso chekuwanda kwevatendi vekudya vaiziva kuti ndiye mwana mumwe chete Jesu akauya kuzovapa chikafu.
Namata kuna Iye Mutsvene weMwana weAtocha kuti avhure nzira
Ane tsitsi uye ane mutsa Infante de Atocha, ini ndinouya pamberi pako kuti ndikuudze kuti ndinokuda sei uye ndinokuda sei, ndinoda kuti utarise maziso ako ane tsitsi kwandiri uye uone kusuwa uye kutambudzika kunondikurira, ndaita zvese mukati mekusvika kwangu asi wangu matambudziko akakomba uye ini handina kuwana mhinduro, Iwe unoshamisira kwazvo haubvi kwandiri: Ini ndinokumbira zvikuru kuti unditumire rubatsiro rwako, ndinokumbira kunyaradzo nekukurumidza uye ubatsire Kuenderera mberi nekuverenga Yakanyanya kuChena uye Mutsvene Mwana waAtocha, mudziviriri wevanhu vese, kuchengetedzwa wavasingabatsiri, muporesi wechirwere chero chipi zvacho.
Ane Simba Rinoyera Mwana: Ini ndinokukwazisa, ndinokurumbidza pazuva rino uye ndinokupa iyi minamato: (vatatu Madzibaba edu, vatatu Rumbidzai Maria uye matatu Mahwende), muchirangarira zuva ramakaita mune rakachena uye risingazivetsi rekupinda mukati maamai vako vanonaka uye vane rudo. kubva kuguta dzvene reJerusarema kusvika kuBheterehemu.
Kune iko kutenda kwandinako mamuri, teerera zvandinokumbira, iko kuvimba kwandinoisa mamuri, ndipe izvo zvandinokumbira nokuzvininipisa: (bvunza izvo zvaunoda kuzadzisa).
Ini, ndinokuda kupfuura zvinhu zvese, ndinoda kukurumbidza zvisingaperi, pamwe chete nemakwaya eKerubimi naSeraphim, akashongedzwa nehungwaru hwakakwana. Ini ndinotarisira, anokosha anoyera Mwana weAtocha, anofara mhinduro kune yangu kuteterera.
Ndinoziva kuti handingavi nemhosva pamusoro pako, uye kuti uchandipa rufu rwakanaka, kuti ndikuperekedze muBethlehem rekubwinya.
Iye, hukama wezvakavanzika zvese uye kuva nemanomano munzira dzakakura kunotipa chishamiso chekutiwonesa nzira nguva dzese kuti tigone kufamba nadzo kuburikidza nekuvimba kwakazara uye chengetedzo.
Avo vanopfuura vanoratidzika kunge vasina kunaka kana kusakwanisa kuyambuka, zvine chokwadi kuti Nekubatsirwa kweMwana Mutsvene weAtocha iwe unogona kupfuura.
Munamato unokwanisa kuita nzira dzedu dzakazaruka munharaunda yemari, mune zvidzidzo, nemhuri kana nezvezvirongwa kana zvinangwa zvatinoshuvira kuzadzisa.
Munamato kuMwana Mutsvene weAtocha kuti udzivirirwe
Wese wakangwara Jesu weAtocha, general protector wevanhu vese, general protection yevasina rubatsiro, Divine Divine chero chirwere.
Mwana ane simba kwazvo, ndinokukwazisa, ndinokurumbidza nhasi uye ndinokupa aya matatu Madzibaba, Rumbidzai Maria nerukudzo, muchirangarira rwendo rwamakaita, mune muviri wakachena mutserendende wamai vako anodikanwa kwazvo, kubva kuguta dzvene riya reJerusarema kusvika kusvika pakuzvarwa mamiriro.
Nezve zviyeuchidzo zvandinoita musi uyu ndinokumbira kuti mundipe zvandino kumbira ...
Izvo zvandinoisa izvi zvakafanira uye ndozviperekedza pamwe neaya kwaya kerubhi nemaserafimi, akashongedzwa nehungwaru, yandinotarisira, iwe mwana weAtocha, chinjo inofadza pane zvandinokukumbira uye ndinoda, uye ndinoziva kuti handisi kuzobva ndakabayiwa moyo nezvako, uye ini ndichava nerufu rwakanaka, kuti ndiuye kuzokuperekedza mukuzvarwa kwekubwinya.
(Pano chikumbiro chaitwa uye vatatu Baba vedu, vatatu Rumbidzai Maria uye Kubwinya kunamatwa)
Dziviriro yeavo vanotenda maari kunyangwe mamiriro ezvinhu.
Uyewo kubatsira uye kuchengetedza vanhu akazviona zvichionekwa kekutanga achaitawo nesu.
Anogona kunge asichaoneki semwana kana kumuona achiuya kwatiri asingaite asi chishamiso chichaitwa nguva dzose kana tikakumbira nokutenda uye nechokwadi chekuti anotinzwa uye anouya kuzodaidzira kwedu kubatsirwa.
Chishamiso chokunamatira kwehutano
Ah mudikani uye anotapira Musana weHutano hwehutano!
Ndinoziva kuti iwe pawakanga uri munyika ino wakanzwira tsitsi munhu wese akatambura, kunyanya avo vaitambudzwa nemarwadzo.
Kwaari infinito rudo rwawaifanira kupa, iwe wakavarapa kubva kune kwavo kusuwa uye kusuwa, uye zvishamiso zvako zvaive zvinonzwisisika kuratidzwa kwekunaka kwako, rudo rwekusingaperi uye tsitsi.
Naizvozvo, o mudiwa Mwana weHutano!, Wangu anodikanwa Mwana, nyaradzo yangu huru, ndinokukumbira nekuzvininipisa kuti undipe simba rinodiwa kuti ndikwanise kutsungirira kurwadziwa, kuzorora uye kunyaradza munguva dzakaoma zvikuru uye, pamusoro pezvose, Nyasha zvikuru Zvakakosha, kuti ndiwane simba rangu, iro simba rangu, hutano hwangu, kana hwakaringana nemweya wakanaka.
Nayo ndichagona kukurumbidza, kukutenda uye kukunamata muhupenyu hwangu hwese.
Sunga simba reizvi munamato unoshamisa kuSanto Niño de Atocha kune hutano.
Iko hakuna kuoma mune iyo iyo Mutsvene weAtocha haaite ndinogona kupa rubatsiro rwako rune simba.
Rangarira kuti tiri kutaura pamusoro paIshe Jesu Kristu mumwe chete akatifira pamuchinjiko wenhamo iyi uye akamukazve pazuva rechitatu, iro rimwechete rinowoneka mumanyoro matsvene.
Hakuna chirwere hachina kurwara kubva iye chaakatakura matenda edu mumakororo, iko iko kutenda kwedu munamato uyu kukumbira chishamiso cheuMwari kune hutano hwedu.
Santo Niño de Atocha yakasimba here?
Nyaya yaJesu kubva pandakasvika mudumbu reMhandara Maria yaive inoshamisa uye iine simba.
Kutenda kuti simba iri rakatopererwa chiitiko chekushayikwa kwekutenda chinowanzouya kwatiri sechinhu chakagadzirwa nemadhadha iwo iwo iwo iwo muvengi anodyara mundangariro medu kuti atiitise kusahadzika.
Kunyangwe makore mazhinji e rufu uye kumuka kwaJesu Kristu, tinotenda musimba rake rezvishamiso
Kuteterera kweMwana anoera weAtocha chiratidzo chekuti simba rake rakakura uye kuti achiri kurangarira isu vanotenda maari. Ngatirambei tichitenda uye tichinamata nekutenda uye iye achagara achitibatsira uye kupindura zvikumbiro zvedu nerudo rusingaperi.
Ndinovimba makada Mwana Wakachena weAtocha munamato.
Munamato weMutsvene Mako waLeon anouya
Munamato kune chinoshamisa Saint Helena